Hawaasaaleen Tigraay Keessaa Qaala’uu Nyaataa fi Boba’aan Rakkataa Jiran: Koree Fannoo Diimaa
Faayilii - buufta namoota qehee irraa buqahanii keessa, mana barumsaa Hadinet, Maqalee, Caamsaa 5, 2021
Rakkoo sababa lola baatii saddeeti dura walitti aansee uumameen, naanno Tigraay keessaa sochiin daldalaa danqamee jira.
Torbanneen lamaan darben hojiin daldalaa erga dhaabatee as, gatiin midhaanii hedduu qaala’e. Baankileen naannoo sanaa cufamanii jiru, uummanni fedhii bu’uuraa guuttachuuf hanqinni maallaqaa isa mudatee jira.
Warshaaleen manca’anii jiru. Daldalaawwan hedduun cufaa dha, uummati hojii waan hin qabaanneef meeshaaleen barbaachisanii fi eegumsa fayyaa dabalatee dhiyeessii tajaajila bu’uuraa irra dhiibbaan ga’ee jira.
Kampaniin oxygen oomishu tokkichi hojii waan dhaabeef hospitalonni hangi tokko kanneen hojii irra jiran sababa keellaaleen eegumsa fayyaa hin jiraanneef dhukkubsattoonni itti heddummaatanii jiru. Biyyattiin COVID-19 hammaachuu isaa beeksisaa ennaa jirtu kanatti, hanqinni isaan mudatee jira. Keellaaleen eegumsa fayyaas sababaa boba’aan ykn ibsaan hin jiraanneef jenereeterii dhaan hojjetaa jiran jechuun koreen fannoo diimaa beeksisee jira